नेपालले नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकेन : बामदेव गौतम नेपाल नवनिर्माण महाअभियानको औचित्य - 24 News Press
नेपाल प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण, पर्यटकीय गन्तव्यका हिसाबले अत्यन्त समृद्ध तथा ऐतिहासिक रूपले वीरता र सौर्यको उत्तराधिकार बोकेको मुलुक हो। एसियाको जागरणसँगै यस मुलुकमा पनि राजनीतिक जागरण प्रारम्भ भएको हो। यस अवस्थालाई हेर्दा छिमेकी देशहरूसँगै नेपालको पनि विकास हुनु पर्ने हो। तर छिमेकीको तुलनामा अहिले पनि नेपाल धेरै पछाडि परेको छ। यसो हुनुमा केही बाह्य र केही आन्तरिक कारण छन्। साम्राज्यवादी आक्रमण र अनेक पटकका विदेशी हस्तक्षेप बाह्य कारण हुन् भने दशकौंको राजनीतिक अस्थिरता र अदूरदर्शी सरकार आन्तरिक कारण हुन्।
चीन र भारतका बीच भूपरिवेष्टित अवस्थामा रहेको नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र हो। लामो समयसम्म यसले भूपरिवेष्टित देशले पाउने निर्बाध पारवहन सुविधा पाएन। राष्ट्रिय हित अनुरूप नभएका छिमेकीका सुझावहरूलाई स्वीकार नगर्दा पटक पटक नेपालले नाकाबन्दी बेहोर्नु पर्‍यो। पछिल्लो पटक विनाशकारी भूकम्पबाट तहसनहस भएको अवस्थामा पनि पाँच महिनासम्म अमानवीय नाकाबन्दीको पीडा बेहोर्न परेको सबैलाई थाहा छ। छिमेकीद्वारा यसरी पटक पटक लगाइएका नाकाबन्दीहरूले नेपालको स्वाभिमानमा चोट पुर्‍याउनुका साथै मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा गम्भीर अवरोध सृजना भएको छ।
नेपालले कुनै पनि मित्र राष्ट्रका विरुद्ध आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र आजसम्म दृढतापूर्वक आफ्नो प्रतिबद्धता पालना पनि गरिरहेको छ। तर चीन र भारतले अवलम्बन गरेका भिन्न राजनीतिक मान्यताबाट उत्पन्न भू–राजनीतिक अवस्थाको प्रभाव विभिन्न समयमा नेपालले बेहोर्नु परेको छ। कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति यो वा त्यो छिमेकीका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गर्न नपाउँदा अनेक पटक नेपाललाई अप्ठेरोमा पार्ने कोसिस गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, कतिपय मानवीय सहयोगसमेत रोकेका छन्। नेपाल यसरी हेपिनुको प्रमुख कारण गरीबी र पिछडिएको अवस्था नै हो।
कतिपय विदेशीहरूले नेपालका केही राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर राजनीतिक समस्या सृजना गर्ने कोसिस गर्ने गरेका छन्। नेपालले यस्ता गतिविधिहरूलाई सिधै आपत्तिजनक भन्न पनि सकेको छैन र रोक्न पनि सकेको छैन। तर, यस किसिमका हस्तक्षेपले नेपाली समाजको विकासमा अनेक अवरोध सृजना गरेका छन्। यी अपमानकारी व्यवहारहरूका पछाडिको मुख्य कारण पनि नेपालको गरिबी र पिछडिएको अवस्था नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सन्धिसम्झौता विपरीत भूपरिवेष्टित देशलाई लगाइने नाकाबन्दी कहिल्यै पनि सही हुन सक्दैन। तर, भूपरिवेष्टित नेपालले बाध्यतापूर्वक यस्ता नाकाबन्दी सहनु परेको छ। नेपालले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिरहेको छैन। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट सहानुभूति पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन किनकि नाकाबन्दी छिमेकीले लगाउँछ र त्यही छिमेकीसित सम्बन्ध नगरी अरू देशहरूसँग नेपालले सम्बन्ध राख्न पनि सक्दैन । भू–राजनीतिक अवस्था नेपालले सृजना गरेको होइन । छिमेकीहरूले भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रणाली नेपालका कारण अवलम्बन गरेका पनि होइनन् । तर नेपालले बेलाबेलामा त्यसको निम्ति पनि अप्ठेरो बेहोर्नु परेको छ । कसैको आन्तरिक तथा बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार नगर्नु यसको प्रमुख कारण हो भने अर्को कारण माथि उल्लेख गरिएजस्तै गरिबी तथा अल्पविकसित राष्ट्र हुनु हो ।
नेपाल दक्षिण एसियाको सबभन्दा पुरानो स्वतन्त्र राष्ट्र हो । आज नेपालले न कुनै विदेशी राष्ट्रको विरोध गरेको छ न कहिले विदेशीको इसारालाई मानेको छ । यसरी आफ्नो स्वाभिमान कायम राखेका कारणले पनि राष्ट्र विखण्डन गरिदिने र समाप्तै गरिदिनेसम्मका धम्की कहिलेकाहीँ नेपालले बेहोर्न परेको छ । यसका पछाडिको मुख्य कारण पनि नेपालको गरिबी र पिछडिएको अवस्थाभन्दा अर्को होइन ।
हरेक परिवर्तनले नयाँ व्यवस्था स्थापित गर्न सङ्क्रमण काल निर्माण गर्दछ । नेपालमा सुरु भएको २००७ सालको क्रान्तिले ५८ वर्षसम्म पूर्णता प्राप्त गर्न सकेन र यति लामो सङ्क्रमण काल बेहोर्नु प¥यो । यस अवधिमा पनि अग्रगमन र प्रतिगमनका बीच अनेक पटक सङ्घर्षहरू भए । कतिपय सङ्घर्षहरूको सफलतापछि निर्माण भएका सङ्क्रमण काल नयाँ सत्ताधारी राजनीतिक शक्तिका कमजोरीका कारण समाप्त हुन सकेनन् । परिवर्तन र विकासका सुस्त प्रक्रियाबाट सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हँुदै आज नेपाली समाज पुँजीवादी अवस्थामा विकसित भएको छ । तर, उत्पन्न सङ्क्रमणकालको निरन्तरता अहिले पनि कायम छ । यो लामो समयसम्मको विविध रूपका सङ्घर्षहरू र तिनले सृजना गरेका सङ्क्रमण कालले नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने आर्थिक विकासलाई पनि अवरोध गरे । पछिल्लो शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सङ्क्रमण काल आज ९ वर्षमा पनि समाप्त भएको छैन । यसले गर्दा नेपालको गरिबी र पिछडिएको अवस्था परिवर्तन गर्न अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन । नेपालसँग समृद्धिका अथाह स्रोतहरू छन् । सबै स्रोतहरू परिचालन गर्न सक्ने क्षमता पनि नेपालसित छ । मानवशक्तिका रूपमा संसारभरि फैलिएका वीर योद्धाहरू नेपालमा बसोबास गर्दछन् । अब नेपाल कुनै पनि कारणले गरिबी र पिछडिएको अवस्थामा रहन हुन्न, रहन सक्दैन र रहन दिइन्न !
उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा ऐतिहासिक अठोट र सङ्कल्पसहित नेपाल नवनिर्माण महाअभियान प्रस्तुत गरिएको हो । यसको एक मात्र उद्देश्य नेपालको गरिबी र पिछडिएको अवस्था समाप्त गर्दै समृद्धि र अग्रगमन प्राप्त गर्नु हो ।
(नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमको शनिवार विमोचित हुने पुस्तक नेपाल नवनिर्माण महाअभियानबाट उद्धृत अंश)
टिकटक प्रयोग गर्नुहुन्छ ? यसले कति कमाउँछ त ?
नेपाल औषधी लिमिटेडले माघ दोस्रो हप्तादेखि सिटामोल उत्पादन गरी बजारमा पठाउने भएको छ । मंगलबार काठमाडौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिमिटेडले माघको दोस्रो…